SAWIRRO: Madaxweyne Axmed Madoobe oo hadda kadib la xisaabtamaya Wasiirrada Jubbaland | HalQaran.com
Home Wararka Maanta SAWIRRO: Madaxweyne Axmed Madoobe oo hadda kadib la xisaabtamaya Wasiirrada Jubbaland
Kismaayo (Halqaran.com) – Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa waxa uu maanta bilaabay la xisaabtanka Golihiisa Wasiirada, iyadoo Wasaaradaha uu ka dhageysanayo waxqabadkooda.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa maanta Wasaaradda Cadaaladda, Garsoorka iyo Arrimaha Diinta ku bilaabay dhageysiga waxbixinta sanadlaha ah, iyadoo uu ka dhageystay wixii u qabsoomay sanadkan sii dhammanaya.
Wasaaradan ayaa waxay warbixinteedan ku soo bandhigtay waxqabadkeeda, iyadoo xubnaha Wasaaraddu ay sharaxaad dheeri ah ka siiyeen Madaxweynaha Jubbaland, wixii u qabsoomay sanadkan 2019.
Warbixinta la siiyay Madaxweynaha Jubbaland ayaa waxaa ku cad sida Wasaaraddu u dedejisay adeegyada loo baahan yahay, min degmo illaa deegaan, isla-markaana ay Jubbaland ka hirgelisay dhismooyinka maxkamado iyo adeeg garsoor oo dhameystiran.
Sidoo kale, wasaaradda ayaa waxay warbixinteeda oo buug lagu diyaariyay ku xustay caqabadaha haysta, ee loo baahan yahay ka maamul ahaan in la hubiyo, ka dibna la xaliyo, si adeegga maamulka uu u wada gaaro dhammaan bulshada.
Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa ugu dambeen boggaadiyay shaqada Wasaaradda Cadaaladda, Garsoorka & Arrimaha Diinta ee Jubbaland.
Axmed Madoobe oo la xisaabtamaya wasiirada Jubbaland